Udonga lwesikhumbuzo sikaPumlani | US Taalsentrum
Op 11/12/2020 geplaas · In Artikels in Xhosa, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale, Terminologie geplaas
Kusothuse kakhulu kwaye kusivise ubuhlungu ukuva iindaba zokushiywa kwethu nguPumlani Sibula ngeCawa umhla wesi-6 kweyoMnga 2020. Ebesachacha ekhaya emva kokufunyanwa ngumkhuhlane we-Covid-19.
UPumlani ebenguGxa wethu oxabisekileyo kwiminyaka emininzi ekwiZiko leeLwimi. Wazibandakanya neYunivesithi yaseStellenbosch ngo-2003 njengeNtloko yeCandelo lesiXhosa kwiZiko leeLwimi kwiYunivesithi yaseStellenbosch, apho wayethwaliswe uxanduva lokuqulunqa isigama sesiXhosa samasebe ngamasebe kule Yunivesithi, kananjalo ekwafundisa abasebenzi nabafundi abaphuma kwamanye amazwe ulwimi lwesiXhosa nenkcubeko.
UPumlani ebesaziwa ngokuthanda ulwimi lwesiXhosa nenkcubeko, kambe esaziwa nangeemfundiso zakhe ezikhuthazayo. Eyona mpumelelo yamgqamisayo awathi wayifumana ibandakanya ukufundisa kwinkqubo yokufundisa isiXhosa eyaziwa njenge-Language and Culture for Global Leadership Adventures (GLA) (inkqubo yasebusika elungiselelwe abafundi bezikolo zemfundo ephakamileyo kulo lonke ihlabathi) ukususela ngo-2007 ukuya phambili, ndawonye nokufundisa uLwimi lwesiXhosa neNkcubeko eNorthwestern University eChicago, USA, ngo-2009. Wafumana imbasa yeNgqonyela neyaziwa njenge-Rector’s Award ngo-2009 nango-2011. Wayishiya i-SU okwethutyana, waphinda wabuyela kwicandelo lesiXhosa ngoOktobha 2019.
Ilifa alishiyileyo liyabonakala phaya kwizintlu zesigama sesiXhosa esingqale kwizifundo ezithile sigama eso asiqulunqele iSosiyoloji, EzeNtalontle, iSayikholoji, ezoMthetho, iiNzululwazi zoQoqosho noLawulo, ezeNkolo, nezoBunjineli. Kananjalo wanikwa noxanduva lokuqulunqa isigama seBhola ekhatywayo, eseQakamba nesoMbhoxo.
Egameni laba sebenzi bonke beZiko leeLwimi, ndingathanda ukuvakalisa amazwi ovelwano koogxa bakhe, usapho nakubahlobo bakhe ndicela ukuba uPumlani lo sihlale simkhumbula ngobuqhula bakhe, ukuzithoba, ukuthanda kwakhe ukutya okumnandi nokuthanda kwakhe ulwimi.
Sifumene imiyalezo emininzi evela kwabo ebesebenza nabo uPumlani, kangangokuba siye sagqiba ekubeni simnike imbeko ngokuthi senze udonga lwesikhumbuzo kwiwebhusayithi yethu ngelokumkhumbula. Nceda uziphe ithuba lokufunda le miyalezo ingezantsi , umkhumbule.
Ndinqwenela ukuba sonke sithuthuzeleke siyazi ukuba yena uphumle ngoxolo. Hamba kakuhle, Pumlani.
– Gqr Kim Wallmach, UmLawuli, iZiko leeLwimi
Umyili, umkhathaleli nomlondolozi wamagama
Amabinzana, iintethwana, amabalana, nobulumkwana obungcanyulwayo kungoku nje
Uthando nokuzingca, intembeko nenyaniso
Iihomba nenene, indlezana, wena uxabisekileyo
Udumzelo nongqisho, unambitheko nesingqi
Iingoma zakho, ilizwi lakho, kanti nokusoloko ukho
Iihambo zethu, ukudibana kwethu namagope esingawabonga
Gxa wethu othandekayo, qabane, mnakwethu, mhlobo
– Erica George, obesebenza naye kwiZiko leeLwimi
UPumlani ndiza kumkhumbula njengogxa wam, ngezizathwana nje ezimbalwa.
Sonke thina bazama ukuphucula isakhono sethu sesiXhosa ngokungenela isifundo esilungiselelwe isitafu, siyakukhumbula loo nzondelelo kaPumlani, emi phaya phambi kwebhodi emhlophe. Nje umntu wakumbuza umbuzo, uqalisa ukubhala ebhodini ngayo yonke imibala ngokulandelelana kwayo, egcwalisa zonke izithuba ezingenanto. Yayiba luvuyo ke kubafundi bolwimi ngoba uninzi lwethu phambili phaya lwalukhe lwafundiswa ngabo abantetho ingeyiyo eyeenkobe.
Ngalo lonke ixesha xa ndifuna ukuqinisekisa ukuba umbuliso, inthetho okanye umthandazo wam wesiXhosa uchanekile, bendikwazi ukutsalela uPumlani umnxeba. Ebezivuyela kakhulu iinzame zethu ezingephi zokufunda ulwimi lwakhe. Ebebebonakalisa ithemba kananjalo esikhuthaza xa sizama amaganyana ambalwa athethwayo. Iinkcazelo zakhe ngeNcubeko yesiXhosa bezizezokwenene zinobulumko ngokunjalo.
UBra Pumlani uyakukhunjulwa kakhulu.
Hamba kakuhle, Pumlani.
– Ydalene Coetsee, owayesebenza naye kwiZiko leeLwimi
Kube ngumothuko nobuhlungu obukhulu ukuva ngokusishiya kukaPumlani.
UPumlani ebengumhlobo nomxhasi, ngakumbi kwiLebhu yokuBhala (Writing Lab) – sineminyaka emininzi simazi. Eneneni ebephila ubomi obunobuntu – ebakhathalele abanye abantu – engumntu onyanisekileyo, othembakeleyo, ozithobileyo nonobubele, enentliziyo entle ngokunjalo.
Yhini, Pumlani – ubuseze ngobuso elizweni kwaye besisajonge lukhulu kuwe – usibonisa kananjalo usifundisa umoya wobuntu nendlela emasikhathalelane ngayo.
Akwaba umzekelo wakho ubuya kuhlala uhleli ezintliziyweni zethu, wona umphefumlo wakho uphumle ngoxolo.
– Anne-Mari Lackay, owayesebenza naye kwiZiko leeLwimi
Ebeya kuba namagama afanelekileyo
UPumlani ebengumhlobo nomnakwethu iminyaka engaphezu kweli-17. Wayengomnye wabantu abanobubele kambe engoyena mntu onentlonipho endakha ndadibana nayo. Wayendimela xa kungekho namnye owenza njalo. Ebendithuthuzela xa ndinoloyiko. Ebede afune ukundinceda naxa ndinengxaki zemali. Zininizi izinto ebesifana ngazo, kuquka iingxaki zamakhaya nokuziva sibekelwa bucala. Sobabini sikhe sakuva “ukuba ngamanxele alungiswayo”.Sakhula ke kulo nto. Akazange andigwebe.
Kwaye sasingafani tu. Wayethanda uTina Turner noShirley Bassy, ngelixa mna ndandithe phithi nguBilly Idol nomculo wohlobo lwe-Southern gothic. Wayethanda iisowupi zaseMzantsi Afrika, ngelixa mna bendikhetha iHBO. Kodwa sobabini besimthanda uMerlin (Isirisi) noGame of Thrones. Kwaye besiyithanda inyama.
Kwiminyaka emininzi ngelixa apho ii-ofisi zethu zazisamelene, sasibanedinga lokuya kwisidlo sasemini emva kosuku lokwamkela. Ibisithi nje yankungena imivuzo yethu siye eBlue Room (igumbi elalisakuba lelokutyela istafu) sithenge eyona plata yenyama inkulu esasinokuyifumana. Iintlobo ezintathu zenyama, kwaye sasiya kuzitya sizigqibe.
Kwathi emveni kokuba sifudukele kwezinye ii-ofisi nasemva kokuvalwa kweBlue Room, saya kudibanela kwaMugg and Bean sidibanela ikofu/iti okanye ilantshi. Sakha sadibanela naseCanal Walk apho wanyanzelisa ukundinika i-milkshake yebhotolo yamandongomane nangelinye ixesha eTyger Valley, apho ndazama ukumthengela ilantshi, kodwa wathatha nje isaladi encinci.
Wandazisa iti yephephamenti njengento yokuncedisa ukucola ukutya. Imnandi nyani. Ndisayisebenzisa nanamhla oku. Sasincokola ngeendlela zokuzilolonga nobunzima bokubambelela kuzo. Sakha sahlazisa oogxa bethu abaninzi kwikona yesitalato kude kufuphi ne-Oude Werf ngokuthi sizenze umatshini wakhe omtsha onepleyiti engcangcazelayo.
Omnye nomnye kuthi ebelithembe lomnye xa kukho iingxaki ezingolwimi, uguqulo-lwimi, isigama, neenkcazelo. UPumlani ebeluthanda ulwimi. Wakha waluchaza ngelithi ligazi lakhe. Wayeziva elulwimi. Kwakuyinto ayithanda kakhulu, kwaye apha kum wabona uthando lokwenza uphando. Wayesoloko eyazi eyona nto ifanelekileyo emayithethwe. Ukuba olu ibilufundo ngobomi bam, ebeyakuwazi awano mazwi afanelekileyo. Ndingamnika la magama kuphela ngenjongo yokushwankathela phantse iminyaka engamashumi ama-20 singabahlobo, minyaka leyo engenakuze ithathelwe indawo yeminye iminyaka.
– Gqr Rose Richards, owayesbenza naye kwiZiko leeLwimi
“Ndizithandela nje umbala”
Ndonakele kukuva ngokuhamba kukaPumlani.
Eyona nkumbulo ndinayo ngoPumlani kumhla ndankqonkqoza kwicango le-ofisi awayesabelana ngayo noZandile kumgangatho osezantsi eNombolo 7 kwiSitalato iBosman ndisamkelwa shushu ngelithi “Molo, Sisi”. Njengoko wayephakamisa amehlo ewasusa ekufundeni iBhayibhile yakhe.
Yandonwabisa eyokuba ndimbone enxibe ijezi yombhoxo yeBlue Bulls, njengoko ndakhulela kambe ndandiphila kufutshane nePitoli ubukhulu becala ebomini bam. Ndaphawula ndisithi indimangalisile kambe indivuyisile eyokuba kanti ungumxhasi weBlue Bulls. Wandijonga enga angabuza umbuzo wathi, “Hayi, andinguye umxhasi, ndithande nje umbala!”
Wanga umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo.
– Shannon Bishop, owayesebenza naye kwiZiko leeLwimi
Iduma elingophiyo kumasebe eelwimi zaseAfrika
Ndagqibela ukuncokola noPumlani xa wayevuyele imbasa yakhe ndaza ndavuyisana naye ngaloo Mpumelelo ingenambaliso. Wayevuya kakhulu. Kanti ndandingayazanga ukuba leyo yayiyincoko yethu yokugqibela. Ndonakele kwaye andikwazi kucinga kakuhle kungoku nje. Mhlobo kabani yena onobubele, inkuthalo nobushushu kangaka. Umphandi nomfundisi ntsapho ophum’ izandla.
Kufandini kambe ulutshaba! Luphi na ulwamvila lwakho.
IZiko lakho LeeLwimi liyalambatha ngaphandle kwakho.
Thina, singamasebe eelwimi zaseAfrika sisonke siyalambatha ngaphandle kwakho Mnu Pumlani “PM” Sibula – mhlobo wam othandekayo nomninawa ngokunjalo.
Wanga umphefumlo wakho, MGEBE omhle, ungaphumla ngoxolo uvuke unobuqaqawuli.
Uyakusoloko ukhona entliziyweni yam.
Ndiyabulela kakhulu ngokusebenza kwakho kakhulu kangakanana ekuphuhliseni iiLwimi zaseAfrika.
– UNjing Nomsa Satyo, iNtloko yeSebe leeLwimi zaseAfrika, kwiYunivesithi yaseFort Hare
“Ndidumile kodwa andazi ukuba yenzeke njani loo nto”
Kuye kwafuneka ndiye kuvumbulula iifayile zamhlamnene kwikhompyuta yam ukuze ndibone ukuba uPumlani lo waqala nini ukuzidibanisa neli Ziko leeLwimi, kwaye xa ndicinga kungenzeka ukuba kwakuphaya ekuqaleni kuka-2004 okanye ngo-2003 mhlawumbi. Ndandisebenza naye kakhulu ngaloo minyaka yangelo xesha kuba ndandisebenza phantsi kwakhe ekuqulunqweni kwezintlu zesigama zokuqala zeSingesi-IsiXhosa-iAfrikaans. Sabanombhiyozo omkhulu wokuvula emva kokugqitywa kwezintlu zesigama zokuqala ngoNovemba 2004. Ndisakhumbula ukuba uPumlani wayekhwankqisiwe yinkathalo awayifumanayo waza waphawula ngelithi: “Ndidumile, kwaye andazi ukuba yenzeke njani loo nto.”
Ukususela mhla wazidibanisa nathi e-7 Bosman Street kutshanje, uye waba yinxalenye yeqela lethu apho, kwaye waye soloko ezidibanisa nathi kwiingxoxo zethu zasetafileni. Bekusoloko kuluncedo kum ukuphulaphula izimvo zakhe njengomnye wabemi boMzantsi Afrika, ethetha njengophuma kwinkcubeko engafaniyo neyam. Siya kumkhumbula.
– Erina Basson, owayesebenza naye kwiZiko leeLwimi
Ifuthe elakhayo nelithabathekisa ngendlela engaqhelekanga
Emva konyaka ongafaniyo neminye, ohlisa isidima sobuntu, intliziyo yam iye yaqaqamba namhlanje ndakuva ngokuhamba kukaBra Pum – yinto ebingalindelekanga kwaphela nedal’ umothuko omkhulu. Ngoko ke ndinga ndingadlulisa amazwi ovelwano olunzulu kuye wonke ubani kwiCandelo leeLwimi. Ngokucacileyo ke phofu, ndinovelwano olungazenzisiyo nosapho nezihlobo zikaPumlani.
Ubudlelwane bam noBra Pum eneneni ibi bobubodwa, ngakumbi ngokubhekiselele kwizimvo zethu sobabini malunga nokubaluleka kobulwimininzi nto leyo isafuna siyinike ingqwalasela yethu nangaphezu kunokuba besiyinika. UPumlani ebenentliziyo emhlophe kwaye ifuthe lakhe kum lindakhe ngendlela engaqhelekanga nethabathekisayo. Andisokuze ndiwalibale loo maxesha esasixoxa shushu ngawo kwiintlanganiso zethu zeveki, sicwangcisa ukuphucula imeko yesiXhosa, hayi ekhampasini kuphela, koko naseluntwini ngokubanzi apho kwakuye kufuneke sisebenze khona. Ndibe nethamsanqa lokuba yinxalenye yovuyo lwakho olungathi lolomntwana malunga nommiselo ngamnye othe waphunyezwa (iikhosi ezimfutshane, izigama, ndibala ntoni na?) Kodwa ebesonwaba kakhulu xa efundisa ulwimi lwakhe awayeluthanda kakhulu, isiXhosa…
UPumlani ebengomnye wabaphathi abathuleyo, kodwa akuliphakamisa ilizwi lakhe bekufuneka uphulaphule, uzigqog’ iindlebe ukuze uyive yonke loo miyalezo ithande ukufihlakala awayefuna ukuyidlulisa.
UBra Pum ebenguntozonke kwiziko lethu kwaye ebenetalente ezifihlakeleyo neendima isitafu esininzi ebezingazazi: ebeyimbongi (i-poet ngabula makhumsha), imbongi eyaziwayo, intaka ukucula oku, kambe kungaphelelanga apho, ebeliqhula elingavelanga elalinokunyumbaza nditsho nocikicane wam. Ekuthanda ke ukutya. Andisokuze ndilulibale usuku mhla sasisenza amalungiselelo womnye wemicimbi yeZiko leeLwimi, xa wayegxininisa kwelokuba ukutya makunganqongophali esitsho esithi “genoeg vleis, asseblief”. Ndisakhumbula ndimva esithi “Oh, Gaaawwwd” (indlela awayelibiza ngayo eli gama kwakukunomahluko!) xa into ingenzekanga kakuhle.
Ndongeza iifoto ezimbini zamaxesha olonwabo endakha ndabanawo nalo mfo ungafaniyo nabanye, elokuqala lelo lamhla kwakukho umcimbi wesitafu ngo-2006 ze owesibini ibe ngulowo wamhla isitafu sandothusayo ngokuthi galakanqa ngomhla wam wokuzalwa ngo-2007.
Andisokuze ndilibale …
– UNjing Leon de Stadler, owayesakuba nguMlawuli weZiko leeLwimi
Imiyalezo emifutshane yovelwano
Uvelwano lwam olunzulu ngokushiywa kwethu nguPumlani. Akwaba beniya kuthuthuzelwa kuyazi ukuba useluxolweni. Ndicinga ngani nabo bonke oogxa bam kwi-LC.
– Audrey Poole, owayesa kusebenza kwiZiko leeLwimi
Thina sikwiCentre for Health Professions Education (CHPE) sinqwenela ukudlulisa amazwi ethu ovelwano angazenzisiyo kuni kwiZiko leeLwimi. Sibuhlungu kukusweleka kogxa wenu nomhlobo wenu uPumlani. Ebesebenzisana kakhulu naye nabalungiseleli beelwimi kwiziko lethu kwaye siyakumkhumbula ngokwenene.
Nonke sininqwenelela okuhle ngeli xesha linzima.
– Gqr Elize Archer egameni leCHPE, iFakhalthi yamaYeza neeNzululwazi zeMpilo
Sivile kambe sikhathazeke kakhulu kukusweleka kukaPumlani Sibula. Siyi-Global Education Centre (GEC), sinqwenela nje ukudlulisa umyalezo wethu wovelwano kananjalo sidlulise nomyalezo wenkxaso.
UPumlani udlale indima ebaluleke kakhulu ekwamkeleni nasekufundiseni abafundi bethu abavela kwamanye amazwe. Uya kukhunjulwa kakhulu ekhunjulelwa umsebenzi wakhe.
Nceda usazise ukuba singaba luncedo ngayiphi na indlela kweli xesha linzima kangaka.
– Sarah Jane van der Westhuizen, Global Education Centre
Ndithumela amazwi am ovelwano ngokuhamba kukaPumlani. Hayi ukubamkhulu komothuko sakuva oku. Yanga singasoloko sikhumbula ukuba ebekuthanda kangakanani ufundisa abafundi.
– Nkszn Kristin Rutgers, Human Resources
Enyanisweni ezi, ziindaba ezibuhlungu nezothusayo ngokunjalo. Ndiya kulukhumbula olo ncumo lwakhe olunobubele kananjalo nokusoloko ebona okuhle ebomini. Ngumntu obekumnandi ukuba naye kwaye ndisoloko ndiyikhumbula i-”after party” esasasinayo emva komcimbi wokuvala unyaka xa ndammemayo ukuba azekuchitha ubusuku kwam nalapho sonwabela ukuncokola kwade kwasebusuku saza sonwabela isidlo sakusasa kwangoko phambi kokuya emsebenzini. Ndazimasa iikhosi zakhe zesiXhosa ezimbini nawayeziqhuba ngobugcisa kambe nangendlela eyonwabisayo.
Phumla ngoxolo Pumlani, uza kukhumbuleka!
– Lize Kruger, Language Centre colleague
Ndiye ndaya kumkhangela uPumlani ngeli lixa lokumiswa ngxi kweentshukumo kuba ndiqondile ukuba kungakubi kakhulu ukuchitha ixesha elingaka uwedwa. Wayenochulumanco engumntu osoloko enethemba.
Lo ngumyalezo ebendisandula kuwuthumela kuPumlani kunye nefoto eqhotyoshelwe kuwo.
Molo mhlobo wam! Usakhumbula ukuba kwakukho ixesha apho sasikwazi ukuwolana ngaphandle kokoyika ulosuleleko? Unjani ngempilo?
– Gqr Anita Jonker, awyesebenza naye kwi-Faculty of Arts and Social Sciences
Video: 30 seconds of Pumlani teaching isiXhosa
Intetho yomngcwabo elungiselelwe isihlobo sethu nogxa wethu othandekayo. Pumlani “Sihlobo sam” Sibula
Ingcali kwezeelwimi kwiziko, ugxawethu ozinikeleyo nomhlobo onyanisekileyo, endabanethuba elilodwa lukuba kufutshane naye, kwiminyaka esibhozo edlulileyo, kwinqanaba lamasebe ngamasebe kwaye mvanje, kwiZiko leeLwimi.
UPumlani ebeligcisa loluntu elinemfesane, uvelwano nokuzithoba, elikhathalele okona kubalulekileyo ebomini, abantu ebesebenza nabo kunye nabo bakhonza bengananzanga iziqu zabo kuphela. Indoda ezinikeleyo, enengqondo, echubekileyo neyona ndoda inobubele obukhulu, eyayibiza wonke umntu ngelithi “Sihlobo sam – my friend!”
Kukho elabadala elithi: “Ukunxiba kakuhle luphawu lokuziphatha kakuhle”. Eli nene, eneneni lalinxiba kakuhle, eziphethe kakuhle yonke imihla, ngendlela yalo yokunxiba , noncumo lwakhe oluyolisayo, kwindawo asebenza kuyo kanti naphi na apho akhoyo.
Ebengafihli makhuba kulanjwa. Yindoda ebiphila ubomi apho akwenzayo kubaluleke ngokufanayo nesiphumo salo nto. Umzekelo ebenguwo ebekwenza ukuba ubengugxa wakhe ongcono, udadewabo ongcono, umhlobo wakhe ongcono kambe ubengcono nasemsebenzini.
Ushiya umzila womsebenzi obunempumelelo apho ebesebenza khona ngobulumko kwiSikolo samaBanga aPhezulu iMakupula nakwiYunivesithi yaseStellenbosch, encedisa abafundi ekubeni babenezakhono zolwimi ezifanelekileyo. Wayesebenza kwiZiko leeLwimi, equlunqa isigama kunye neeglosari ezilwimininzi, ukucedisa abahlohli nabafundi ekubeni babe nokukuqonda nangakumbi okuqulethwe ezifundweni. Ubenegalelo nasekuthiyeni amagama esiXhosa izakhiwo ezininzi, amasebe neeFakhalthi zakwiYunivesithi yaseStellenbosch, magama lawo ahamba nawesiNgesi nesi-Afrikansi.
Wayengumqulunqi novulindlela kuncwadi lwesiXhosa kuzo zonke iilwimi ezahlukahlukeneyo zaseNtshona Koloni. Uthungelwano lwakhe loqulunqo kwezolwimi lwalunabe ukusuka kwiiFakhalthi ngeefakhalthi kwiYunivesithi yethu, kwiiklabhu zoluntu ezingolwimi kwelase Stellenbosch, ukuya kwiYunivesithi zamazwe ngamazwe, iPansalb, iSebe leMfundo eNtshona Koloni, iiNkonzo zeSizwe zoLwimi, i-Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA), ne-Writers Guild… ndibala ntoni na. Nje kunyakomnye kuphela ndisebenza naye kwiZiko leeLwimi, uPumlani wandifundisa ngokwakhe indlela yokunceda abafundi abaphuma kwabo balwimi ingesiso isiNgesi ukuze bakuqonde nangakumbi nakuphi na okuqulethwe zizifundo, ngokuqulunqa iiglosari eziphambili zeekhosi okanye isigama sokunceda abafundi, ngeli lixa esabelana ngokunjalo ngobungcali bakhe obungazanga balanywa ngaphambili kwikhosi yethu yesiXhosa esiyifundisa abafundi abalwimi labo lwenkobe lungesiso isiXhosa kwiYunivesithi iphela.
Ndikhumbula wonke ubani obesiza kwiofisi yakhe – ababesakuba ngabafundi bakhe nabaphathi bamasebe – bemncoma ngokuba nefuthe kwakhe nobubele bakhe obungenambaliso. Apha ngezantsi kukho abanemiyalezo emtyibelayo nendizichazelwe ngabo bamaziyo:
UGqr Vuyo Mntuyedwa: “Ndikule ndawo ndikuyo nje ngubhuti Pumlani. Ndifundisa eYunivesithi namhlanje, kwaye kungenxa yokuqeqeshwa nguye.”
UGqr Xolani Mavela: “Umzi wesiXhosa ngokubanzi ulahlekelwe. UPumlani sisithwalandwe, isikhuthali, ithandazwe, ithandamntu novulindlela kuphuhliso lwesiXhosa jikelele.”
Nksz Nosisa Beyile (uMcebisi ngeKharityhulam): “Andikholelwa ukuba uMhegebe usishiyile. Kazi sakuncedwa ngubani na ekuhleleni iinkqubo zoncwadi lwesiXhosa siyiWCED?”
Abafundi baseKayamandi: “Ukuba sasingalifumenanga ithuba lokufundiswa ngutitshala uSibula, ngesingekho kwezi ndawo sikuzo namhlanje.”
Ekugqibeleni olu asilulo na uphawu lwendoda yamadoda: indlela aphila ngayo, indlela aphatha ngayo abanye, kungakhathalisekile nokuba ujongene neentshaba ezinjani ebomini bakhe? UPumlani ebeyindoda ebalulekileyo kwaye undikhumbuza uAnastasia Netri xa le nto indoda eyichaza ngelithi: “Indoda eyiyo iyakusoloko ifuna ukuba ubalasele. Ifuna ukuba ubengokhwankqisayo.” Simkhumbula ngaloo ndlela ke u-”Sihlobo sam”, kuba ngenzondelelo yakhe, uncumo lwakhe nenkxaso yakhe engakhethiyo, wayefuna ukuba wonke ubani abesemagqabini.
Wanga umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo “Sihlobo sam”, uvuke ebuqaqawulini. Hamba kakuhle ulale ngoxolo Mpondo, Mgebe, Mngxongo!
Umhlobo wakho nodade wenu
– Gqr Zandile Kondowe, ugxa wakhe kwiZiko lweeLwimi
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Jongste nuus Nuutste nuus Ons tale TerminologieUdonga lwesikhumbuzo sikaPumlani